မြတ်လေးငုံ: လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်ဘီစီသတင်းဌာနက မနက်တိုင်း ထုတ်လွှင့်တဲ့ တူဒေးအစီအစဉ် အင်တာဗျူး (အပိုင်း ၁၊၂)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်ဘီစီသတင်းဌာနက မနက်တိုင်း ထုတ်လွှင့်တဲ့ တူဒေးအစီအစဉ် အင်တာဗျူး (အပိုင်း ၁၊၂)
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, January 22, 2011
ကျမ တို့ မိသားစု ရဲ့ အမှတ်တရ
Myat Lay Ngon
၂၁ ပင်လုံ တတိယညီလာခံ ရလဒ်အပေါ် ပြည်ပတိုင်းရင်းသားတွေအမြင် - ၂၁ ပင်လုံ တတိယညီလာခံ ရလဒ်အပေါ် ပြည်ပတိုင်းရင်းသားတွေအမြင် 17 ဇူလိုင်၊ 2018 - ကိုကျော်အောင်လွင် ------------------------------ ၆ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ေ...
တနင်္သာရီ ရေကြီး - တနင်္သာရီမြို့အတွင်းက ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးနေတာကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် / Photo: Than Soewin - facebookတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း မိုးကြီးတာကြော...
အမှိုက်ပစ်သူများ ရှက်ဖွယ်။ - နိုင်ငံကြီးသား မပီသသော စိတ်ဓါတ်မရှိကြသော လုပ်ရပ်။ သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ပျော်ပါးမှုမှ မဟုတ်၊ မည်သည့် ပွဲလန်းသဘင်မှာမဆို အတွင်းအပြင်နေရာတွေမှာ အမှိုက်တွေကို ပစ်ချ...
ဆယ်ခွေမြောက်စီးရီးအတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ အငဲ - ဆယ်ခွေမြောက်စီးရီးအတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ *အငဲ * (ကြေးမုံ ၁၃၊ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၇)
၈၈ ရဲ့ နော်မန်
- ကွန်ပျူတာသင်တန်း ကြော်ငြာစာရွက်ကလေးသမီးရဲ့။ Computer Basic ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာအခြေခံ သင်တန်းရယ်၊ DTP လို့ဆိုတဲ့ ရုံးသုံးစာစီစာရိုက်သင်တန်းရယ်၊ Graphic Designe...
A post from Popular News Journal - ရာဇဝင်များ၏ သတို့သမီးလည်း စိုးရိမ်နေရှာမည်လား ==================================== တစ်နိုင်ငံလုံး အုတ်အော် သောင်းတင်း အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ကန့်ကွက်မှုများပြုလ...
YY (ရဲရင့် ကနေဒါ)
့ အောင်စိုးမိုးကျော်(၂) ခရီးသည်တင် အမြန်ရေယာဉ်မတိမ်းမှောက်မှီ - r
စစ်သား တစ်သန်း တိုးချဲ့မယ့်ဆိုတဲ့ ပါတီ ကိစ္စ အပိုင်း (၂) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တလှိုင်မြင့်) - *စစ်သား တစ်သန်း တိုးချဲ့မယ့်ဆိုတဲ့ ပါတီ ကိစ္စ အပိုင်း (၂)* *(ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)* ၂၁ရက်နေ့က MRTV မှာတင်ထားတဲ့ အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီလား အမျိုး...
PR စနစ်ဘာကြောင့်ကျင့်သုံးချင်ရတာလဲ - လက်ရှိအစိုးရရဲ့ အကြီးဆုံးအတိုက်အခံ NLD ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှု ရလာဒ်တွေကို ပြန်ငဲ့ကြည့်ရင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ဆန္ဒမဲ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ...
မြန်မာပြည်က၀န်ကြီးတွေ လူပျက်စကားတော်တော်ပြောကြတယ် - မြန်မာပြည်က၀န်ကြီးတွေ လူပျက်စကားတော်တော်ပြောကြတယ် ---------------------------------------------------------------- (သတိ - ကဗျာမဟုတ်ပါ) ဘာ............. မီတာ...
လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ။ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် ၂၀၁၂ (ရုပ်/သံ) - ( အပိုင်း ၁ ) ( အပိုင်း ၂ ) source by : http://www.facebook.com/DVBTVNews http://www.ngunngemoe.net/feeds/posts/default
► 2012 (1003)
▼ 2011 (1274)
▼ 01/16 - 01/23 (17)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်ဘီစီသတင...
The Voice ဂျာနယ်. 7-7
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဝင်ရောက်နေရာယူမယ့် တစ်မတ်သားအဖွဲ့ အမ...
ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓားပြများ ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ SAMHO JEW...
သေရင် မီးခိုးနဲ့ပြာ . . . ပါသွားမှာက ကုသိုလ် အကုသု...
မြန်မာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဦးတေဇပိ...
တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်၊ တစ်လထက် တစ်လ၊ တစ်ရက်ထက် တစ်ရက်...
ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ပျံသန်းသွား . . .
ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့ ဂီရိ (၃)လပြည့် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖ...
တံထွေးအဆွတ်ခံနေရသော လူငယ်ထု၏ နားရွက်များ..
နအဖ၏ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ (၂)
နအဖသန်းရွှေ အာဏာပြအမိန့် ထုတ် ဆင့်ခေါ်တဲ့ လွှတ်တော်အစ...
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ နျူးကလီးယားစီမံကိန်း နှင့် ဗိုလ်မ...
ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ အပိုင်း (၁,၂,၃) ကိုမောင်...
► 01/02 - 01/09 (43)
► 2010 (1991)
► 10/24 - 10/31 (49)
► 08/08 - 08/15 (40)
► 07/18 - 07/25 (42)
► 06/20 - 06/27 (40)
► 05/30 - 06/06 (50)
► 05/16 - 05/23 (55)
► 03/14 - 03/21 (45)
followers (အသစ်တင်သမျှ ဖတ်မယ်နော်)